Exotic, ongaqondakali futhi banomoya wokungenisa izihambi Thailand awusakufuni abaholayo phakathi zokungcebeleka ezihamba phambili emhlabeni. Ethandwa kakhulu phakathi izivakashi Russian futhi lesi siqhingi eponymous ka Phuket nge emabhishi ayo oncomekayo, inethiwekhi ebanzi ukuzijabulisa izindawo, izindawo zokudla, massage izikhungo. Ihhotela yokubhuka lapha ukwenza cishe zonke Russian tour opharetha, futhi kuba lula kakhulu ukwenza inthanethi. Kukhethwa yokuhlala e Phuket libanzi impela - kusukela isabelomali 2-3 inkanyezi sokunethezeka, ukunikela yokuhlala limi ngomumo. Omunye lemukelekako kakhulu - Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach 5 *, ingxenye inethiwekhi yenkampani Swiss Movenpick Ihhotela futhi abantu abajwayele ukuvakasha kuyona, ngakho konke lapha, kuhlanganise intengo, ezingeni eliphezulu kakhulu.
Singasho, ogwini we-Andaman Sea, iminithi kusukela Karon Beach, inikeza zikanokusho Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach Phuket endaweni emaphakathi 5 *. Kusukela sezindiza, elise 47 km ukuze ufike lapha imizuzu 40. Eduze nobe emigwacweni yase dolobheni kusukela ekuseni kuze kwephuze kakhulu kusihlwa eziningi ezitolo ezincane, imigoqo kanye amathilomu. Mayelana 900 amamitha kude uyithempeli, kunalokho kuba emakethe. Wonderful Ipaki Dino, kusukela othokoze kokubili ngabantwana nangabantu abadala, nje 2 km. Karon Yenamani ezinomsindo amahora ophithizelayo 10-11 ntambama, ngemva kwalokho cishe zonke izindawo zokuzijabulisa zivaliwe. Efuna ukuhamba ubusuku bonke elinde endaweni Patong komuzi, lapho-10 km. Lokhu kungenziwa sinqotshwe itekisi noma wendawo tuk-Tuks, intengo ithikithi okuyinto incike ibanga. Ukuze Patong kuyoba uhla 300-400 baht.
Kusukela imizuzu yokuqala uvuselele Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach. Phuket (Phuket) is kabanzi saziwa, eyagunyazwa nayindikimba abasebenzi ehhotela. Guest ngamunye elinde ukufika isiphuzo esibandayo, a napkin ukusula off izandla komgwaqo, izithelo egumbini. Ihhotela elakhiwa ngo-1983, kodwa Ukulungiswa kwesakhiwo okuphelele zenzeka lapha ngo-2014, ngakho zonke zisesimweni ephelele. Le ndawo hhotela omkhulu. Cishe ihlanganisa indawo ka 83,000 square metres. Izimpendulo ezivela izivakashi, kuba okumnandi futhi okusikhumbuza ingadi Botanical, kukhona imibala eminingi kangaka futhi kahle igcinwe izitshalo ezingavamile. emakhoneni eziningi lapho ahlotshiswe e Thai-isitayela Gazebo obekwe ngaphansi kophahla lotshani, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu ezithakazelisayo, imithombo yamanzi kanye nezinye izakhi okuhlobisa. Phakathi zonke lezi ubuhle bheka umzimba ophelele, kumavila zokuhlala ehhotela, amachibi uyabhukuda, nemishayo, izindawo zokudla, izitolo, spa, ebaleni lokudlala zezingane, izinkantolo tennis namasimu lokugijima yokupaka mahhala. Kubalulekile - endaweni evikelwe futhi livulekele izivakashi kuphela.
Ihhotela reception usebenza ubusuku nemini, babe ekhuluma abasebenzi Russian. Lapho ungakwazi bawaletha imithwalo yakho egumbini imithwalo, izinto elondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo, itekisi kanye nodokotela, exchange (umshini imali), ukubhuka ingane umzanyana ukuze ubhalisele izifundo zokupheka Thai, ukuqasha imoto.
Kulabo afika eThailand vacation futhi kukhona 10 umhlangano amagumbi letingemasayizi lahlukene kanye esihle izixazululo ibhizinisi ezindabeni zebhizinisi ehhotela.
Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Ibhishi (Phuket) inikeza izivakashi zalo zenani ezihlukahlukene amakamelo - kusukela ngcono "Deluxe" esigabeni yokuhlala ukhululekile. Zonke ahlotshiswe in isitayela wesimanje, kodwa oluxube design asempumalanga. Isici esiphawulekayo Igumbi - endaweni enkulu, ukusebenza esiphezulu nokuhlanzeka. Hlanza lapha ekuseni nakusihlwa, amashidi futhi pillowcases baguqulelwa nsuku zonke kanye amathawula ngesicelo izivakashi ingase ihlukahluke, futhi kabili ngosuku. Amakamelo ekwakheni babe balcony. isigaba sabo:
- Uphakeme - isikwele izikwele 36. Imibono evela amafasitela noma engadini noma kolwandle (intengo kuyahlukahluka). Isisetshenziswa: iqoqo eliphezulu ifenisha, kuhlanganise ithebula usofa bese ikhofi, ngabanye air-conditioning, TV esine satellite, ephephile (mahhala), mini-bar (iziphuzo kuwo imali, amanzi khulula kuphela), iketela kagesi, itiye nekhofi zosizo, ucingo ayina ebhodi kanye nensimbi. I inhlanzeko yokugezela has a echibini nge usule elikhulu, indlu yangasese, umshini wokomisa izinwele, okugeza kanye eshaweni ngesikhathi esifanayo, Slippers, okugeza izembatho, izigqoko ngokuba eshaweni, anhlobonhlobo imikhiqizo inhlanzeko yomuntu siqu.
- Suite - indawo 72 sikwele. Indlu enamakamelo amabili, kusakhiwo kufaka lokulala (embhedeni kuphela double), igumbi lokuphumula nge iqoqo ifenisha upholstered, 1 yokugezela inhlanzeko.
- Family. Indlu enamakamelo amabili, endaweni ka-42 square. Onesimo - amakamelo amabili okulala, izingane kanye nabantu abadala, 1 yokugezela.
Izivakashi zehhotela Movenpick Resort Spa Karon Beach Phuket esiyokhunjulwa isikhathi eside, njengoba leli hhotela has okukhethwa kukho yokuhlala okukhethekile futhi bobukhosi bangempela enikeziwe in the Villas. Inkonde ngayinye ifakwe umshini ithala emangalisayo, kuvulandi, eshaweni ongaphandle (amanzi ashisayo njalo), ezinye efakwe okubhukuda nge Jacuzzi, amafonti, kukhona indawo ahlomele ethola izivakashi. Imikhakha amakamelo Villas:
- Family - indawo 57 tikwele. Ensimini yangasese kukhona ichibi elincane. Igumbi izindawo ziyefana emzimbeni.
- Suite Family - indawo 104 sikwele. Onesimo - amakamelo amabili okulala, igumbi ophilayo, okuyinto ifakwe endaweni yokudlela, ababili amakamelo kwenhlanzeko.
- Deluxe King - indawo 40 tikwele. Eyikamelo elilodwa, engadini kukhona eshaweni, endaweni kuvulandi yezivakashi.
- Residence - indawo izikwele 120. Onesimo - amakamelo amabili okulala, ikamelo elikhulu ephilayo, ikhishi, indlu enamakamelo amabili kwenhlanzeko.
Ukudla ezihlwabusayo kakhulu futhi ezihlukahlukene linikeza izivakashi zayo Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach. Impendulo izinga ukudla service omuhle kuphela. Thenga ukuvakasha kungaba ohlelweni kuleli hhotela kuyinto "zonke okufakayo", khona-ke kuyoba anawo izivakashi kuyoba ukudla khulula neziphuzo usuku lonke, noma kuphela ibhulakufesi. Kulokhu, imvume kuyoba ishibhile, futhi ukudla kwasemini kanye dinner, izivakashi bazokwazi kunoma yiziphi zokudlela ezinhle. Ingqalasizinda Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach yakhiwa ezintathu yokudlela kuphela yakhelwe nge European, Thai futhi Cuisine Italian kanye pizza yokudlela futhi 6 nemigoqo.
Ekuseni, imenyu njalo ephalishini, okusanhlamvu, ubisi, ayi, slicing ushizi, amasaladi, izitsha Thai, ehla, nama-dessert, eziningi izithelo. Le restaurant has izitsha yezingane futhi izihlalo futhi kwaba khona kusukela ukudla izingane phezu 1 nonyaka owodwa ubudala njalo ungakhetha sizodlani.
Igama eligcwele ihhotela Moevenpick Resort Spa Karon Ibhishi (Phuket) akuyona nje. Lapha izivakashi zijabulela indawo emangalisayo spa, ehlanganisa 8 amakamelo, alinikela izinhlobo eziningana massage, sauna, Jacuzzi, ubuhle salon, ukuqina isikhungo. On sayithi eseduze 3 okubhukuda. Komunye wayo Ubuye okugeza obishini. Sun bed amathawula nezambulela ezindaweni Sun ihlale ikhona.
Izingane ehhotela, futhi, kube yinto. Kubo, club yezingane, kukhona ebaleni lokudlala emangalisayo, pool zezingane kanye izithombe ehlukile.
Izingane kanye nabantu abadala lo Animators ozama usuku lonke, ukunikela umzimba, Ukuvivinya umzimba ngendlela amanzi, izifundo umdanso, imidlalo, kwakha kanye kusihlwa imibukiso nasemakhonsathini.
Ihhotela Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Beach 5 * itholakala komgwaqo ebhishi umphakathi we Karon, uhlanzekile kakhulu futhi ethule Phuket. Onogada esemsebenzini esangweni, njalo ukumisa imoto, nokusiza izivakashi ukuze uthole lapho waya olwandle. Karon Beach idume "ukucula" isihlabathi walo crunched ngaphansi kwezinyawo zakhe, njengoba iqhwa yethu Russian. Le ndawo eziningi, ngisho isizini ezimatasa. Sunbeds, izambulela, imigoqo kanye zonke imali nokuzijabulisa, emnyango khulula ebhishi. Ukuya Phuket kule ndawo kufanele bacabangele ukuthi Sea Andaman, ngokuvamile okumatasa futhi ujabule amagagasi ngokwanele okusezingeni eliphezulu. Ezinye izindaba zika-iholide ogwini ephelele abadala kanye kids.
Zonke ezinhle Movenpick Resort & Spa Indawo Karon Ibhishi (Phuket), kanye 5 izinkanyezi yabo ke uyazigcwalisa ngokugcwele. Akumangazi-ke ukuthi ukalwe zazigcina ziphakathi 4.7-4.8 5 kokuhlaziywa amaphuzu. Wakhetha leli hhotela for kokuhlala kwawo kumelwe uqaphele ukuthi ngesikhathi efika reception kubalulekile ukushiya idiphozi 4,000 baht. Uma inkokhelo yenziwa nge-credit card, ke, kanye imibhalo efakazela ukuthi kungokwalabo umuntu ufikile ehhotela, qiniseka ukwethula lapho usufika kuleyo ndawo, kungenjalo Administration bayoba nelungelo ukubeka i-akhawunti yesibili.
- Hlola Kwenziwa kusuka 15-00.
- Hlola - kuze kufinyelele 12-00.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 ngaphandle inkokhelo yenziwa.
Nge izilwane yinoma uluphi uhlobo kanye nosayizi komnikazi ehhotela akuvunyelwe.
Mhlawumbe kusimo kuphela leli hhotela, ezishiwo ukubuyekezwa, kuba amanani aphezulu amakamelo futhi zonke izinkonzo. Lapha kumelwe sikhumbule ukuthi yokubhuka amahhotela e Phuket, futhi kulokhu, kungaba kwenziwe nge izaphulelo zonyaka, kwezinye ejensi travel ifinyelela 30%. Ngaphezu kwalokho, leli hhotela lingabhukwa ngokuzimela ngaphandle ngokweqile ukuhamba ejensi ukuthi kuyoba ishibhile.
- indawo ekahle;
- endaweni fantastically enhle;
- "bobukhosi 'amakamelo, ikakhulukazi Villas;
- izindlu lihle nokuhlanzeka yonke indawo;
- abasebenzi abaqeqeshwe kahle.
Doppler ultrasound nasemilenzeni engezansi: cwaningo amacebo. Izinkomba inqubo
Pokemons kagesi: Uhlolojikelele, izici kanye nezici
Buyekeza entsha Audi A6 2012